के–के छन् चिसो पानीमा नुहाउनुका फाइदा – Etajakhabar
एजेन्सी– चिसो पानीमा नुहाउने कि तातो पानीमा रु त्यो तपाईंको इच्छा । धेरैजसो मानिस तातै पानी रोज्लान् । तर अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्, ‘चिसो पानीमा नुहाउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ।’
स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले छापेको छ ।
चिसो पानी हाम्रो शरीरमा पर्दा शरीरमा झनझनाहट उत्पन्न हुन्छ, तनावमा शरीरले यस्तो प्रतिक्रिया गर्छ, जसबाट मुटुको धड्कन र रक्तसन्चार बढ्छ । चिसो पानीले नुहाउनु सुरक्षित पनि छ । कम्पन हुनेुवाहेक यसले शरीरमा कुनै नराम्रो असर गर्दैन । बीबीसीको कार्यक्रम ‘ट्रस्ट मी आइएम डाक्टर’ मा डा। क्रिस वान टोलेकन भन्छन्, ‘तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि तपाईं बुढो हुनुहुन्छ या मुटुको रोगी हुनुहुन्छ भने तपाईं बेहोस हुन सक्नुहुन्छ या हर्ट अट्याक पनि हुन सक्छ।’
केहीवैज्ञानिकहरु चिसो पानीले नुहाउँदा शरीरको बोसो कम गर्ने बताउछन् । तर डा। टोलेकनका अनुसार यसको पनि कुनै प्रमाण छैन । तर चिसो पानीले नुहाउनु अण्डकोषका लागि भने लाभदायी हुन्छ । किनभने तातो पानीले नुहाउँदा अण्डकोषको तापमान सन्तुलन बिग्रन्छ र यसको सिधा असर वीर्य उत्पादनमा पर्छ ।
डा। टोलेकन भन्छन्, चिसो पानीले नुहाउँदा के–के फाइदा हुन्छन् भन्ने अध्ययन अहिलेलाई सुरुवाती चरणमा छन, यसका वैज्ञानिक तथ्य पत्ता लागिसकेको छैन । उनी भन्छन्, ‘यदि चिसो पानीले नुहाउँदा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन भने यसको कुनै बेफाइदा पनि छैन ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०३, २०७४ समय: १२:१६:५२
ग्रीन टी पिउनुहुन्छ ? ग्रिन टी कसले पिउने कसले नपिउने ? जान्नुहोस् यसका फाइदा
स्याम्पुले गराउन सक्छ गर्भपतन !
के तपाई नियमित हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ ? जान्नुस् यस्ता छन् हस्तमैथुनका ५ फाइदा
प्रचण्ड पत्नी सित दाहालको स्वास्थ्य स्थिति भिग्रियो, अहिले हस्पिटलको आइसियुमा राखेर उपचार हुदै
दूधमा मह मिसाएर पिउनुहोस् , जसको यस्ता छन् ५ अद्भूत फाइदा
चिसोबाट बच्नका लागि हिटर ताप्नु कति फाइदाजनक ? हिटर ताप्दा यी कुराहरुको होस पुर्‍याऔँ
कागतीका फाइदा मात्र होइन बेफाइदा पनि छन् ! हेर्नुहोस जन्नुहोस फाइदा लिनुहोस्
के तपाई मोटोपनदेखि चिन्तित हुनुहुन्छ ? तीव्र रूपमा बोसो घटाउने यस्ता छन् १० उपाय
जाडो मौसममा मेथी खानुका यस्ता छन् ११ विशेष फाइदा , खान नभुल्नुहोला?